In Your Words – Somali | City Heights Life
Education, Personal Interest, Somali
By Hussien Mumin
Waxaan ku dhashay Soomaaliya bishii Sebtember 3 deedii 1993. Reerkeygu wuxuu lahaa beer, taasu waxay keentay inaan nolol degan ku noolaano. Had iyo jeer, waxaan xusuustaa marka aan dibedda ku orordaba urta khudaarta dareyga ah ee beerteyada ka soo baxaysa, kuwaas oo kala ahaa liinta, muuska, iyo ansalaato. Deegaanka noocaas ah ee aan ku barbaarey wuxuu iga dhigey inaan qof dabeedcad macaan ahaado, isla marhaantaasna, aan ku faraxsanaado nolosha aan ku noolahay.Waxaan xusuusanahay hal xilli, had iyo jeer roob ayaa maalin kasta da’i jirey, aabbahay roobka da’aya ayuu aad uga walbahaarsanaa, laakiin anigu ma garaneynin wax uu ka walbahaarsan yahay. Bil kedib magaaladii daad ayaa qaadey. Sidaas darteed, qoyskeyga iyo Anigu gurigii waan ka baxney. Dhawr maalmood kedib, waxaan ogaaney in beertii uu daad qaadey. Maadaama ay hooyadey uur lahayd, arrintaasu dhib ayey ku keentay. Dareenka ku saabsan dhibaatada daadka naga soo gaadhey mid aan sharixi karo maaha, sababta oo ah noloshii waa inaan dib u biloownaa oo guri dhisano, taasuna noloshii carruurnimadeyda dhibaato weyn ayey u keentay.
Magaaladii dib uguma aanaan soo noqon karin, sababta oo ah dagaalkii ayaa ku soo dhawadey aaggii aan ku nooleyn.Habeen ayaa waxaan maqaley oo keliya dhawaaqa xabbada, iyo qoyska aan deriska nahaya ee nagu xiga oo ooyeya, waayo qof qoyska ka tirsan ayey xabbadi ku dhacday. Islamarkiiba Aniga iyo qoyskeyku gurigii waan ka guurey oo doon ayaan racnay, waxaanan tegney magaalo kale oo ay eededey aan la degi karey.
Maadaama aan gaajooney oo anaanaan cunto haysanin, ugu dambeystii waxaan gaadhey gurigii eeddadey. Maalintii xigtey, hooyadey waxay dhashay gabadh, taasuna aniga oo 4 jir si aad ah ayey iiga farxisay. Qoyskeygu wey faraxsanaayeen, sababta oo ah nolol cusub ayey galeen. Ayeydey oo ku nooleyd dalka Maraykanka ayaa si aad ah isugu dayday sidii ay Maraykanka nagu keeni lahayd. Aabbahay isaguna wuxuu jeclaa inaan Maraykanka imaano, si aan waxbarasho u helo.
Bishii Noofember 7deedii , 1997 waxay ahayd maalintii nolosheyda iigu xanuun badneyd. Hooyadey ayaa qolkeedii ku dhimatay, Dhawr bilood kedibna, walaashey oo iga yareyd ayaa iyana dhimatay. Xanuunka waxaa dareemay markii aan arkay walaladey o oiga weynaa iyo aabbahay oo ooyeya. Kedib markii ay hooyadey iyo walaashey oo iga yareyd ay dhinteen, waa la iska deganaa, waxaanan sugeyney tigidho aan dalka Maraykanka ku nimaadno.
Markii aan dalka Maraykanka imid, wixii dhibaatooyin ah ee i soo gaadheyba meel ayaan iska dhigey oo nolol cusub ayaan bilaabey. Walaalkey iyo aniguba waxaan la yaabaney sida aan nolosha cusub ula qabsan lahayn. Waxaan had iyo jeer ka walbahaarsanaa, sida aan ula qabsan lahaa dadka afka sida faseexa ah uga hadleya. Tusaale ahaan, sawir gacmeedyada (kaartuunka) ay badanaa carruurtu daawadaan kala ah, “Caillou”,” Arthur”, iyo “dragon Land” waxay iga caawiyeen inay nolosha Maraykanka wax iiga ifiyaan ama muujiyaan.
Anigu waxaan ka imid magaalo nalku ku yar yahay, oo had iyo jeer dagaal ka socdaan, waxaan helay fursad wanaagsan oo ah inaan bulsho xor ah ku soo biiro sida Maraykanka, taas oo ii keentay inaan helo nal aan had iyo jeer dameyn. Aniga waxay waxbarashada iyo guriga nalka leh ii ahaayeen. Taas oo sabab u noqotey inaan heer sare ka gaadho hawlaha dugsiga ee aan guriga ku qabto.
Markii aan Maraykanka imanayey, waxaan rajeynayey in aysan macquul ahayn inaan barto maaddooyinka ay baraneyaan ardeyda aan isku fasalka nahay. Tusaal ahaan, macallinku wuxuu wax u dhigayey xawaare aanan la socon karin. Maadaam aanan aqoon u lahayn kalmadaha la isticmaaleyo, waxaan macallinkeyga ka codsadey inuu igu qoro fasal ila heer ah. In kastoo ay ardeyda kale igu maadsanayeen, maadaama aan heerkii fasalkeyga hoos u dhigay, taas dan kama aanan gelin. Sababta oo ah waxaan ogaa inaan xaga hoos ka soo bilaabo, si aan xaga ugu sarreysa u gaadho.
Markii aan sannad ku jirey dugsiga hoose, waxay macallimiinteydu iga caawiyen akhriska, ku hadlista iyo qoraalka, si ay u hubsadaan inaan heerkii loo baahnaa gaadhey. Dhiirgelintaas aan macallimiinteyda ka helay waxaan ku ogaadey in Maryakanku ku dhismey jacayl iyo xoryiad, sababta oo ah sida ay macallimiinteydu ii xanaaneyeen lama sharixi karo. Had iyo jeer Maraykanku wuxuu ii ahaan doonaa meel aanan illoobin, oo aan maskaxda ku hayo. Maraykanku wuxuu i siiyey fursad , igana taageertey inaan gaadho waxyaabo badan oo aan ku fekeri jirey inaan sameyn karin.
Sabti kasta waxaan u shaqeeyaa bulshada, waxaanan ka shaqeeyaa YMCA. Waxaan qabtaa shaqooyinka ay ka mid yihiin inaan cuntada iyo cabbitaanka fudud qeybiyo, inaan garsoore noqdo, iyo inaan ardaayada ama bannaanada dhismeyaasha nadiifiyo. Aniga ahaan shaqooyinka bulshada loogu adeego ii maaha inaan dugsiga sare uun kaga baxo oo keliya ee waxay ii yihiin tubta aan ku helayo aqoon dheeraad ah iyo masuuliyadaha kale iyo si aan nolosha dugsiga sare ka dambeysa ugu gudbo.
Waxaan rajeynayaa inaan galo jaamacada la yidhaahdo San Diego State University, si aan u xanaaneyo aabbahay, oo aan u helo shaqo wanaagsan, si aan reer uu yeesho oo nolol cusub u bilaabo
Carta del editor: Presentando a City Heights Life →